यी हुन् मोटी केटीसँग बिहे गर्नुका फाइदा (६ टिप्स्)
काठमाडौं । पातलो ज्यान भएकी केटी मात्रै सुन्दर हुन्छिन् भन्ने कुरा अहिले त ट्रेन्ड नै चलिसकेको छ । त्यसैले हरेक केटाको रोजाइमा पातलो ज्यान भएकी केटी नै पर्छिन् ।
तर, मोटी केटीबारे थोरैले मात्र सही कुरा बुझेका हुन्छन् । तपाई अविवाहित हुनुहुन्छ यी तथ्य बुझ्नुस्, जसले तपाईलाई मोटी केटी बिहे गर्न लालयित गर्नेछ । मोटी केटीसँग विवाह गर्नुका केही फाइदा यस प्रकार छन्ः
१. मोटी केटीसँग बिवाह गरेपछि सपिङमा तपाईको पैसा खर्च हुने छैन । किनभने मोटी केटीहरु कपडाका बारेमा धेरै सौखिन हुँदैनन् । उनीहरु नचाहिने काममा धेरै पैसा खर्च गर्दैनन् ।
२. मोटी केटीहरु पातलो ज्यान भएकी केटीको तुलनामा मनले धेरै सफा हुन्छन् । मोटी केटीको मनमा कसैपृति घृणाभाव हुँदैन । साथै मोटी केटी आफ्नो घर पक्षका व्यक्तिको धेरै ख्याल राख्छिन् ।
३. वैज्ञानिक खोजबाट पनि यो पत्ता लागेको छ कि, मोटी केटीसँग बिवाह गर्ने केटाहरु जीवनमा धेरै खुसी हुन्छन् । यदि तपाई खानपिनमा शौखिन हुनुहुन्छ भने पनि मोटी केटीसँग विवाह गर्नुको फाइदा हुन्छ । किनकी मोटी केटीहरु पनि खानपिनका लागि धेरै शौखिन हुन्छन् ।
४. एक अनुसन्धानका अनुसार मोटी महिला आफ्ना पतिलाई धेरै माया गर्छन् । श्रीमानका हरेक समस्यामा उनीहरुको बलियो साथ हुन्छ । उनीहरु कपटी हुँदैनन् । उनीहरुका लागि श्रीमान् नै सबैथोक हुन्छ ।
५. यस्तै मोटी महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषहरुमा आत्मबलको विकास हुने पनि अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । उनीहरु हरेक अप्ठेरो समयको सजिलै सामना गर्नसक्ने हुन्छन् । त्यसकारण त्यस्ता केटीहरु पुरुषका लागि बलियो सहारा बन्छन् ।
६. मोटी केटी आज्ञाकारी पनि हुन्छन् । जसले गर्दा श्रीमतीले श्रीमानको भनेको कुरा सहजै स्वीकार गर्ने वातावरण बन्छ । यस्तोमा पति–पत्नीबीच झगडा हुने सम्भावना पनि निकै कम हुन्छ ।